Luxury Bedroom 8
Luxury Bedroom 8 Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် ငွေဖလား ( Silver Bowl )
Augustine’s Antiques ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာရိုးရာ လက်မှု့ ပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦးများတွင် အိမ်သုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သစ်စေးသုတ်ထား သည် ငွေဖလား ( Silver bowl ) ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းငွေဖလား ခွက်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့ ၏ အလှူပွဲများ မင်္ဂလာ ပွဲများနှင့် အလှူခံ မဏ္ဍပ်များတွင် အသုံး ပြုသင့်သော မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှု့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ၄င်းငွေဖလားခွက် ( Silver Bowl ) ကိူ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Augustine’s Antiques ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Luxury Bedroom 9
Luxury Bedroom9Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လှပသော တရုတ် ကပ် တံခါး ( Louvre Door )
Myitmakha ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ကျွန်းသစ်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက် စသော အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်းသစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အိမ်အဆောက်အဦး တံခါး ရွက်များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ရုံးခန်း ဟိုတယ်တို့ တွင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန် သည့် တရုတ်ကပ်တံခါး ( Louvre Door ) ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ သေသပ်လှပသည့် အပြင် ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့ပီး ကြာရှည်ခံပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်း တို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦးတံခါးရွက်များ ကိုလှပပီး ကြာရှည်ခံသော တရုတ်ကပ် တံခါး ( Louvre Door ) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Myitmakha ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Luxury Bedroom 10
Luxury Bedroom 10 Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
Luxury Dining Room 1
17000 ~ 25000 $
Luxury Dining Room 1 Dining Table chairs 8 - 14 chairs Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
EXECUTIVE OFFICE DESK / TABLE SERIES
VITO Office Furniture မှာ ရနိုင်တဲ့ EXECUTIVE OFFICE DESK / TABLE SERIES (Made in Malaysia) အချို့ကို တင်ပြပါရစေ။ Hermally-fused laminate ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောပြီး တာရှည်အသုံးခံကာ အစွန်းအထင်းများလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ စားပွဲတွင် အံဆွဲများထည့်ပေးထားသောကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အရေးကြီးဖိုင်တွဲများကို တစ်နေရာတည်း သေသေသပ်သပ် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော အနေအထားနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုရ သင့်တော်သော Series တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းများလည်း သင့်တင့်မျှတပါတယ်။ နယ်မြို့များမှဝယ်ယူပါကလည်း လိုက်လံပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးနေ ပါတယ်။Size စုံ Design စုံ ရှိနေတာမို့ လာရောက်ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့နွေးထွးစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ စိတ်ဝင်စားသော Customer များအနေဖြင့် Email သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း မှာယူနိုင်သည်။ လူကိုယ်တိုင်လည်း လာရောက်ကြည့်ရှု ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။